रविको भिसा नलाग्दा खुशी थिईन रन्जना: रविलाई म्यासेजमा लेखेको प्रमाण देखाउँदै रञ्जनाको ससुरा (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/रविको भिसा नलाग्दा खुशी थिईन रन्जना: रविलाई म्यासेजमा लेखेको प्रमाण देखाउँदै रञ्जनाको ससुरा (भिडियो सहित)
काठमाडौं । रवि रुवालिको वुवा रञ्जनाले आफ्ना छोरालाई लेखेको म्यासेज देखाउँदै मिडियामा आएका छन् । अदालत र मिडियामा रञ्जनाले ग’लत बोलेको भन्दै रविका बुवा प्रमाण सहित मिडियामा आएका हुन् । उनले यस्तो सवाल जवाफ गर्ने चाहना नहुँदा नहुँदै पनि रञ्जनाले ग’लत बोलेका कारण आफु मिडियामा आउनु परेको बताएका छन् ।
उनले आफ्नो छोराको भविष्यका लागि रञ्जनालाई छोरी बनाएर पढाएको बताए । उनले छोरा नपढाएर बुहारीलाई छोरी बनाएर पढाउँदा आफुले अ न्याय सहन परेको प्रतिकृया दिए । उनले अहिले रञ्जनाको बारेमा बोल्न पर्दा पनि आफुलाई पी डा भएको बताए । बुहारीले गरेको तिरस्कारका कारण छोराले जिवन गु’माएको बताए ।
रञ्जनाले सासु ससुरालाई जानकारी दिएर अष्ट्रेलयामा कोठा सरेको, देवरको विवाहमा नआएकी उनी आफ्नो दिदीको विवाहमा आउँदा पनि जानकारी दिएको भन्ने कुराको पनि ससुराले जवाफ दिएका छन् । अदालतमा आफ्नो अगाडी नै त्यसरी ग’लत बोलेकी रञ्जनाले मिडिया सामु पनि ग’लत बोलेको बताए । रञ्जनाले श्रीमानसंग राम्रो सम्बन्ध थियो भनेर बताएको कुरामा पनि ससुराले खण्डन गरेका छन् । उनले दिदीको विवाहमा तीन वर्ष पछि भेटिएको आफ्ना श्रीमानसंग एउटा पनि फोटो किन छैन ? उनले प्रति प्रश्न गरे रञ्जनाको मोवाइलमा एउटा पनि फोटो किन छैन ?
छोटो समयमै सन्दिपको ठुलो फड्को, ६ करोडमा किनेको घर राजामहाराजा बस्ने भन्दा कम छैन, आमाबाबु लाइ पनि ल्याए घरमा (भिडियो)
लाखौं ठगिए भन्दै चर्चित गायक सुनिल गिरी मिडियामा ! पल शाह खेलेको गीतमा उनलाई यसरी डुबाईयो (भिडियो हेर्नुस)
देउरानी जेठानी पहिलोपटक आमनेसामने, रञ्जनाले रविलाई नै लगाइन् यस्तो दोष, देउरानी झन कडा दिइन् यस्तो मुखभरीको जवाफ (भिडियो)